Dare remakurukota ehurumende raita neChipiri musangano waro wechitatu gore rino rikatora matanhano anosanganisira kuvandudza mutemo wezvekufambiswa kwemashoko pamwe nemutemo wemashandiro emapurisa kuitira kuti iinderane nebumbiro remitemo yenyika.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vati dare ratora chisungo chekubvisa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, AIPPA, uye pachinzvimbo chawo pachaumbwa mitemo yeAccess to Information, Zimbabwe Media Commission pamwe neProtection of Privacy kana kuti Data Protection.
Vati musangano wavo wazeya hwaro hwekuumba mutemo weZimbabwe Media Commission uye hwaro hwemamwe mabhiri maviri huchazeyiwa munguva pfupi inotevera.
Amai Mutsvangwa vatiwo dare remakurukota ratambira hwaro hwekushandura Police Act uye zvave kureva kuti bhiri iri rave kutotanga kunyorwa nebazi rezvemitemo.
Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rinoona nezvemukati menyika, VaCain Mathema, vati Police Act iri kushandurwa kuitira kuti ienderane nezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika.
Vati nguva yareba kubva zvapasiswa bumbiro remitemo yenyika uye mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vave kuda kuti mutemo wemashandiro emapurisa uenderane nebumbiro remitemo yenyika.
Dare remakurukota ranzwawo kugurukota rezvedzidzo yepasi, VaPaul Mavima, rikaita chisungo chekuti bazi reZimbabwe Schools Examinations Council harisi kuzokwidza mari dzebvunzo dzeGrade 7, Form 4 neForm 6 gore rino.
VaMavima vati vaberekei vakaomerwa nehupenyu ndosaka vatora danho rekusawedzera mari dzebvunzo.
Pa Grade 7 mari yebvunzo madhora matanhatu pamwana mumwe; Form 4 madhora gumi nemashanu pachidzidzo chimwe chete; kozoti madhora makumi maviri nematanhatu pachidzidzo chimwe chete muForm 6.
Dare remakurukota ratendawo varairidzi, avo vakaramwa mabasa svondo rapfuura, nekudzokera kumabasa richiti zvaratidza kuti vanokoshesa dzidzo yevana.
Musangano waudzwawo nezverwendo rwaVaMnangagwa, kuAfrican Union, AU, nemisangano yavaikaita rikatambirawo chisungo chakaitwa nevatungamiriri veSouthern African Development Community, SADC, kuAU chekutsigira Zimbabwe pamwe nekukuridzira kuti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
VaMnangagwa nechikwata chavo vakadzoka kumusha neMuvhuro, uye kunze kwemisangano neAU neSADC vakaitawo misangano nevemabhizimisi vakaita seveEthopian Airlines, iyo yakaratidza chidzo chekuda kushanda nekambani yehurumende yeAir Zimbabwe.
Air Zimbabwe ine chikwereti chemamiriyoni nemamiriyoni emadhora kuEthiopian Airways iyo yanga ichikundikana kubhadhara.